Ukuphupha iNombolo 7 Discover ▷ Discover Online ▷ ➡️
Inani lesixhenxe lihlala liqondwa njengelona libalulekileyo kuwo onke amanani. Ihlala inentsingiselo ekhethekileyo. Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, kubaluleke ngakumbi kule meko, ngokwenkolo yobuKristu, uThixo wadala el mundo ngeentsuku ezisixhenxe. Kwakhona, kukho amabali eBhayibhileni ajongene nenombolo 7, umzekelo, apho uJoseph atolika khona amaphupha kafaro weenkomo ezisixhenxe ezinqinileyo kunye ezisixhenxe ezondleke kakuhle. Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, iveki ineentsuku ezisixhenxe, kukho izinto ezisixhenxe ezimangalisayo emhlabeni, kwaye uSnow White wadibana ncakasana nemifuziselo esixhenxe kule ntsomi.
Kwilizwe lasentshona, inani lesi-7 lithathwa njengenani elinethamsanqa, kodwa kwisimboli yamanani yase-Asia itolikwa njengezisa amashwa.
Inani i-7 linokuba neentsingiselo ezahlukeneyo xa livela emaphupheni ethu. Ingatolikwa ngokwasemoyeni okanye ngokuzolileyo nangokufanelekileyo, umzekelo, njengenxalenye yokulingana kwemathematika. Fumana ngakumbi malunga nentsingiselo yomfanekiso wephupha "inombolo 7" kunye nokudityaniswa kwexabiso lesixhenxe:
1 Uphawu lwephupha «inombolo 7» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «inombolo 7» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «inombolo ye-7» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «inombolo 7» - ukutolikwa ngokubanzi
Zisixhenxe iisimboli phakathi kwamanani asephupheni. Ingcwele nokugqibelela. Ibonisa ukuba umntu ekubhekiswa kuye unento ethile ebomini babo. zifezekisiwe kwaye uziva wanelisekile ngumsebenzi wakhe.
Ngamanye amaxesha uphawu "inombolo 7" kule meko ikwajolise ekutsaleni ingqalelo kwinto yokuba ngoku lixesha lokuphumla. Umntu ochaphazelekayo ufumene ikhefu elifutshane kwaye kufuneka aphile emzimbeni nasengqondweni kwimizamo yeeveki ezidlulileyo okanye kwinyanga ezidlulileyo.
Ngokufezekiswa kweprojekthi «yobomi», ngokwembono ngokubanzi, ihlala ihamba utshintsho isandla ngesandla. Inani lesixhenxe libonisa ukuba inqanaba elitsha lobomi liyaqala, ukuphupha kunikezelwe kwimiceli mngeni emitsha. Oku kunokusebenza kwimicimbi yobungcali nakwinkqubela phambili yabucala.
Amaxesha ngamaxesha ikwathathwa njengophando lwamaphupha ukuba amanani abonisa iipropathi. Nabani na ophupha inani lesi-7 uthathwa njengokhethekileyo Kucinga kwaye ayisebenzi. Ukuphupha kunomdla kwimibuzo yefilosofi. Kwangelo xesha, ubonakala egxeka ngakumbi oontanga bakhe.
Ukuba ubona izinto ezisixhenxe ziphambi kwakho ephupheni, isimboli inokutsala umdla wakho ukuze ungazibandakanyi kakhulu nengqondo kubomi bemihla ngemihla - iphupha lisongela ukuphoswa luphuhliso olubalulekileyo kwimeko yakho yokwenyani okanye ukungahoyi ubudlelwane bezentlalo .
Uphawu lwephupha «inombolo 7» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwephupha ngokwengqondo, inani lesi-7 limela elomoya. Uphuhliso olungaphezulu Isimboli ibonisa ukuba umntu ekubhekiswa kuye ukhulile ngokwengqondo. Funda ukusebenzisa amandla akho ngcono ngokuziphicotha nokuzazi ngcono.
Ukuba umntu ekuthethwa ngaye unesibindi ngale ngcebiso, uya kuba nakho ukwakha isingqisho elungileyo kubomi bemihla ngemihla. Kwelinye icala, isebenza kakuhle, kodwa kwelinye icala, inokuzinyanga ngamaxesha okuzola kunye nokubonisa.
Uphawu lwephupha «inombolo ye-7» - ukutolika kokomoya
Ngokwendlela yokutolika ngokwasemoyeni, inani lesixhenxe lifumaneka ephupheni njengophawu lwe Abantu Kuyo yonke.
Kwangelo xesha, inani u-7 linani lika Umnqa wobomi. Ngamanye amaxesha umntu uthetha naye kwimeko yokomoya. Amandla oMlingo a.